WhatsApp yakagadziridzwa uye inoenderana neFace ID | IPhone nhau
Iyo yekuvandudza yeWhatsApp ichangobva kuoneka muApp Store ine chinhu icho vazhinji vashandisi vanga vakamirira kwenguva yakareba: Dziviriro yeApp uchishandisa Face ID. Sezvo Kubata ID kwakasvika paiyo iPhone 5s, vashandisi vasingaverengeki vakakumbira kushandiswa kweichi chiyero chekuchengetedza kune iyo FaceBook mameseji application, uye makore mashanu gare gare yasvika.
Iyo yekudzoresa yave kuwanikwa yekurodha pasi kubva kuApp Store mune yekuvandudza isingasvike 100MB. Iko hakuna kunozivikanwa shanduko kunze kwekudzivirirwa kwechishandiso kuburikidza neFace ID. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekumisikidza iri basa, saka isu tinokutsanangurira kwauri nemifananidzo uye neese ruzivo.
Sarudzo nyowani yekukiya iyo application neFace ID chengetedzo sisitimu kuti ivhure haina kushanda nekutadza, uye unofanirwa kufamba nemamenyu akati wandei mukati megadziriro dzekushandisa kuti umise. Kana iwe uchida kuzviedza, enda ku «Zvirongwa», mune yepazasi kurudyi chikamu chekushandisa, uye kamwe mukati meiyi menyu enda ku «Akaunti> Yakavanzika> Screen Lock» kwaunogona kumisikidza sarudzo «Inoda Chiso ID» kumisikidza ichi chekuchengetedza chiyero. Iwe unogona zvakare kumisikidza iyo yakareba sei iwe yaunoda kupfuudza kusvikira kuvhura kuchikumbirwa, pamwe nesarudzo dzinotangira kubva "Pakarepo" kusvika "1 awa".
Kubva panguva iyoyo, pese paunovhara iyo app uye iyo nguva yawakatsanangura mapashure, uchafanirwa kumirira wechipiri kuti izive chiso chako kuti chikumbiro chivhure. Chinhu chakakosha chaunofanira kufunga nezvacho: iko kunyorera hakukupe sarudzo yekushandisa kodhi yekuvhura kana ikasakuziva, nzira chete yekuivhura iri Face ID, chimwe chinhu chinogona kunetsa kana paine chikonzero chayo anomira anokuziva. Pane nzira yekusvetuka nhanho iyi, uye ndiko kuwana iyo Sisitimu Zvirongwa, uye mu "Face ID uye kodhi" menyu, pinda iyo "Mamwe maapplication" chikamu uye deact WhatsApp.Kana zvakadaro, kana iwe ukavhura, ichakubvunza iwe yeiyo kodhi yekuvhura ye iPhone yako uye iwe uchave unokwanisa kupinda kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inovandudzwa uye inotsigira Chiso ID
Yakanaka ... ichi chekuchengetedza chiyero chinobatsira zvakanyanya kuchengetedza zvakavanzika zvekutaurirana uyezve kugara uchidzivirirwa kubva pameso ekuda kuziva uye kuchengetedza kubva kune chero inokanganisa hurukuro kunze uko ... kurarama kwenguva refu kusavimbika
Shhhhh! Zvanga zvakakodzera here kuti iwe utaure? lol
Maitiro ekuisa HomeBridge uye wedzera zvishandiso